काठमाडौं । विशाल बजार कम्पनीको शेयरमा आज निकै चलखेल भएको छ । अघिल्लो दिन ७ हजार ४ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको सो कम्पनीको शेयर बिहीबार पहिलो केही मिनेटमा नै सकारात्मक सर्किट लागेर ८ हजार २ सय ८ रुपैयाँ पुगेको थियो भने त्यसको केही मिनेटमा नै सो कम्पनीको शेयरमूल्य घट्दै नकारात्मक सर्किट लागनी ६ हजार ७ सय १६ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसरी...
काठमाडौं । सिईडिबी हाइड्रोले आईपीओ निष्काशनको मिति तोकेको छ । सो कम्पनीले बुधबार विवरणपत्र प्रकाशन गर्दै यस्तो मिति तय गरेको हो । कम्पनीले बैशाख १७ गते शुक्रबारका दिनबाट आईपीओ निष्काशनको मिति तय गरेको हो । कम्पनीको २५ लाख १६ हजार कित्ता आईपीओका लागि न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिन सकिने विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको शेयरमा वैशाख...
काठमाडौं । १२७ रुपैयाँ प्रतिशेयर आम्दानी रहेको एक लघुवित्त कम्पनीको करिब २० करोडको आईपीओ छिट्टै बजारमा आउने भएको छ । मोरङको कटहरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १९ करोड ७७ लाख ३० हजार बराबरको १९ लाख ७७ हजार ३ सय कित्ता शेयर आईपीओका रुपमा आउन लागेको हो । कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी ४१ करोड ६ लाख ७० हजार...
काठमाडौं । एनआईसी एसिया लघुवित्तको शेयरमूल्यमा सोमबार पनि तीव्र उछाल आएको छ । अघिल्ला दिनहरुमा केही कारोबारपछि मात्रै शेयरमूल्यमा सर्किट लाग्ने गरेकोमा सोमबारको बजारमा भने १० कित्ताको कारोबारमा नै सर्किट लागेको देखिएको हो । सामान्यतः प्रि–ओपन सेसनको कारोबारमा कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्यमा एकपटकमा ५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि हुन...
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा सूचीकृत रहेको एवं धितोपत्र बजारमा प्रतिशेयर रु. पन्ध्रसय रहेको एक कम्पनीको आम्दानी दश रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले प्रकाशित गरेको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रु. १०.७४ रहेको हो । १० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ५३...
काठमाडौं । लगानी गरेको कम्पनी राम्रो चाहिने भनेको यस्तै बेलामा हो । तपाइँ यस्तो शेयर स्क्रिपको छनौट गर्नुस् जसले बजारको वृद्धिलाई साथ देओस् तर कसरेक्सनमा पछि हटोस् । तर त्यसो हुन सम्बन्धित कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास चाहिन्छ । २/३ दिनको कारोबारले नै कुन कम्पनी विश्वासिलो र कुन अविश्वासिलो भन्न सकिँदैन तर ३ दिनसम्म दोहोरो अंकमा...
काठमाडौं । तिहारको शुभकामना र आफ्नो कार्यकालको अन्तिम औपचारिक भेटमा रेवतबहादुर कार्कीले कात्तिक १५ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दैगर्दा रेवतबहादुर कार्कीले ४ वर्षे कार्यकालमा आफूले गरेका धेरैजसो कामहरुको फेहरिस्त सुनाउन भ्याए । करिब १० मिनेटको मन्तव्य औपचारिकता बाहेक अधिकांश समय सोही सूची सुनाउदा पनि उनले मुस्किलले सबै समेट्न भ्याए ।...
काठमाडौं । ४ कम्पनीका सवा २ अर्ब रुपैंया बराबरका शेयर आजदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य भएका छन् । ती संस्थाहरुले वितरण गरेको हकप्रद तथा बोनस शेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएसँगै बजारमा कारोबारयोग्य भएका हुन् । मुक्तिनाथ विकास बैंक फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स, छिमेक लघुवित्त र नाडेप लघुवित्तका कुल ३८ लाख कित्ता थप शेयर नेप्सेमा सूचीकृत...
विश्वमै पुँजीबजारलाई सबैभन्दा लाभप्रद र सबैभन्दा ‘रिस्की’ लगानीको क्षेत्र पनि मानिन्छ । यस क्षेत्रमा बुझेर लगानी गर्नेहरुले छाटै समयमा आफूलाई विश्वबजारमै स्थापित गराएका छन् भने बहकावमा, लहलहैमा वा अर्को कसैले कमाएको देखेर बुझ्दै नबुझी हाम फाल्नेहरु रातारात भिखारी समेत भएका छन् । शेयर बजार लगानीकर्ताहरुको खेल्ने ठाउँ पनि हो ।...
काठमाडौं । सधैं कारोबारीहरुको योजनाका आधारमा चल्ने बजारलाई आइतबार लगानीकर्ताको उत्साहित मनोविज्ञानले चलायो । लगानीकर्ताको उत्साहकै कारण लगानीकर्ताहरुले बजार परिसूचकलाई निरन्तर बढाउँदै २२ अंक माथि पुर्याउँदा पछिल्लो आधा घण्टा कारोबारीले नाफा बुक गर्दा केही करेक्सन भएर बन्द भयो । बजारमा अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन लगानीकर्ताहरुको...
बजारमा चलायमान रहँदा धेरै तहबाट फाइदा हासिल गर्न सकिन्छ । लगानीको निर्णयको बाबजुद, त्यहाँ कति लगानी गर्न, लगानी कसरी गर्ने भन्ने राम्रो बिन्दु तपाईँले कसरी पाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो। धेरै युवा लगानीकर्ताहरूले सम्भावित कम्पनीको '४०१ के' योजनाका लागि रोजगारी गर्नेछन्, ब्रोकरेज खाता खोल्ने अर्को विकल्प हो । तपाईँ जुनसुकै व्यवसाय...
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक शेयर बजारको पाँचौं ठूलो कम्पनी बन्ने भएको छ । यसअघि उत्कृष्ठ १० भन्दा बाहिरै रहेको बैंक मर्जरपछि एकैपटक ५ औं नम्बरमा उक्लिने भएको हो । ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकको पुँजी र बजार तात्कालिन बजार पुँजीकरणको आधारमा यस्तो सम्भावना देखिएको हो । कसरी आउँदैछ ५ औं नम्बरमा ? मर्जर सम्झौताअघि कारोबार रोक्का...